“Francisco Isco wuxuu isku badalay qof wax matare ah.”. – Gool FM
“Francisco Isco wuxuu isku badalay qof wax matare ah.”.
(Real Madrid) 29 Nof 2018. Laacibkii hore kooxda Real Madrid Predrag Mijatović ayaa sheegay inuusan jecleysan qaab ciyaareedka Los Blancos ee xili ciyaareedkan, isagoo dhinaca kale tilmaamay in ay la dhibtooneyso qaab ciyaareedka kala duwan.
Predrag Mijatović ayaa wareysi uu ku bixiyay radio “Cadena Ser” wuxuu kaga hadlay xaalada kooxdiisa hore ee Real Madrid, gaar ahaan laacibka Francisco Isco.
“Ma jacleysan qaab ciyaareedka kooxda Real Madrid ee xili ciyaareedkan, waxaan arkayaa koox aan hubeysneen, waa inay soo fiicnaadaan hadii ay doonayaan in ay koobab ku guuleystaan”.
“Inaad gaarto wareega xiga ee tartanka Champions League, adiga oo hogaaminaya group-ka waa arin aad u wanaagsan”.
“Waa inay horumariyaan waxyaabo badan, ima aysan qancinin xitaa qaab ciyaareedkooda kulankii Roma, waxay la ciyaareen koox ku liidata horyaalka Serie A”.
Intaas kadib laacibkii hore kooxda Real Madrid Predrag Mijatović ayaa wuxuu ka hadlay dhibaatada heysata xili ciyaareedkan Francisco Isco.
“Waxay u muuqataa in xili ciyaareedkan aysan ku tiirsaneen kooxda Real Madrid, waxaana u maleynayaa in ciyaaryahanka uu fahansan yahay arintaas, Francisco Isco wuxuu isku badalay qof aan waxba tari Karin”.
“Ma garaneyno sida loo tababaro, iyo inuu wanaagsan yahay maskax ahaan iyo inkale, ama jir ahaan in ay dhibaato heysato, waxaan qabaa inay adag tahay inaad fadhido kursiga keydka”.